Ferguson “Dhaawac waa jiraa laakiin waxaa noo jooga ciyaartoy khibrad leh”. | Toosiye.com	Friday, September 19th, 2014	http://www.toosiye.com/wp-content/themes/naqshadtiigalgaduud/images/" alt="Toosiye.com logo" border="0" />
Ferguson “Dhaawac waa jiraa laakiin waxaa noo jooga ciyaartoy khibrad leh”.
Dec 8, 2012 - jawaab	Realtime Web Statistics
LONDON. Tababbaraha kooxda Manchester United Alex Ferguson ayaa ka hadlay ciyaarta barri dhex mari doonta naadigiisa iyo kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Manchester City.
Alex wuxuu sheegay in ciyaartaas barri dhici doonta ay ka maqnaan doonaan kooxdiisa Anderson, Nani iyo Antonio Valencia.
Wuxuu kaloo tilmaamay inuusan khatar galin karin Shinji Kagawa iyo difaaca Nemanja Vidic oo kasoo kabanaya dhaawac muddo naadiga uga maqnaa.
Dhammaan laacibiinta ka maqan naadiga ayuu haddana Ferguson wuxuu si cad u tilmaamayaa inaysan wax badan ka maqnayn naadiga wuxuuna yiri, “Waan ogahay inuu na haysto dhaawacyo laakiin ogow wali ciyaartoy kale ayaan haysanaa”.
Wuxuu kaloo yiri,
“Waxaa noo jooga ciyaaryahanno khibrad leh, waxaan nasiyay Darren Flatcher, 10 daqiiqo ayaan dheelsiiyay ciyaartii Cluj”.
Wuu sii waday oo yiri,
“Michael Carrick wuu soo laabtay, waxaa kaloo haysanaa Ashley Young, Wayne Rooney, Robin van Persie, Denny Welbeck iyo Javier Harnandez, dhammaantood waa koox dhisan oo aan safi karo”.
Ferguson ayaa intaas ku daray,
“Usbuuc kasta suurtagal maaha inaad ciyaaryahan walba safto, waa inay ogaadaan middaas taageerayaasheenu”.
Isagoo ka hadlaya dhaawaca naadiga haysta ayuu yiri,
“Sannado badan waxaa na haysatay xaalado dhaawac ah, naadi kastana way ku dhacdaa, sida caadiga ah boqolkiiba 10 (10%) usbuuc walba waxaa dhaawac kaaga maqnaanaya rag ka tirsan naadiga”.
Wuxuu kaloo intaas ku daray.
“Tani waa xaaladdaan ku sugannahay hadda, laakiin macneheedu maaha inaan quus taagannahay”.
Isagoo ka hadlaya xaaladda daafaca iminka kasoo kacay dhaawaca Nemanja Vidic ayuu tilmaamay inuusan khatar galin karin laakiin uu iminka ka qayb galo tababbarrada ay kooxdu samayso”.
Guul ay ka gaarto United oo ay ka gaarto City oo ay lix dhibcood ku hayso hoggaanka maaha waxay United doonayso oo kaliya ee waxaa weeye inay iska difaacdo magac xumo kale oo kasoo raacda naadigaas oo xili ciyaareedkii hore ay kala kulmeen guul-darro aan waligeed lagu dhigin United.
Ferguson oo ka hadlay wuxuu yiri,
“Xaqiiqdii labadii sano ee ugu dambeeyey Man City waxay gaartay horumar, xili ciyaareedkii ugu dambeeyeyna koobka ayay ku guulaysteen, waan ognahay inay yihiin kooxda kaliya ee ugu wayn ee aan la tartamayno inay iyaga yihiin, laakiin inaan garoonka Etihad kusoo guulaysano waxay noo tahay farxaddeena ugu wayn”.
Wuxuu tilmaamay inay u ciyaarayaan sidii xili-ciyaareedkii hore oo kale wuxuu si khaas ah uga hadlay laacibka afka hore uga ciyaara City Edin Dzeko, wuxuuna yiri, “Waa naadi khatar ah, waxay goolasha dhaliyaan daqiiqadaha ugu dambeeya ee ciyaarta, siiba markay soo galiyaan Edin Dzeko, marka waxay leeyihiin marxalado la tilmaami karo”.